Izandiso Zezinwele Zabantu Eziphansi Ezingabizi Ngezinwele Zemvelo
Okuzenzakalelayo uphenyaHlunga ukuthandwaHlunga Isilinganiselwa esijwayelekileHlunga ngamuvaHlunga amanani: low highHlunga intengo: ukusuka phezulu kuya phansi
Bonisa i-12 ekhasiniBonisa i-24 ekhasiniBonisa i-48 ekhasini
Isiqeshana esihle kakhulu se-Clip Ins For Hair Natural
Izandiso Zami Zezinwele Zemvelo zinikeza ikhwalithi ye-Premium quality ye-Clip Ins yazo zonke izidingo ze-Sista! Sinezisekelo zethu ezihlanganiswe nesiqeshana ezandisweni ukufanisa konke ukuthungwa kusuka ku-3a konke okwakungokuka-4c. Sineziphakamiso zesikrini kulabo abaguqukayo nakwabesifazane abanemvume futhi!
I-hair hair clip I-Ins unikeze ukulinganisa okuhle okuhambisanayo. Ungazigqoka zidonsa phezulu nge-ponytail ephakeme, isigamu sehhafu phansi, ngengxenye ehlangothini, nokuningi okuningi.
I-Easy To Blend:
I-Clip-ins inikeza ukulinganisa okuphezulu kokukodwa. Izindlela ongahlukanisa ngazo nezitayela zakho zingapheli. Ama-clip-ins avumela izinwele zakho ukuba zivele zivame ngokwemvelo futhi zikhudlwana ngaphandle kokuchitha amahora ku-salon yezinwele.
Ububanzi bethu bokunamathisela bubude obude kusuka ku-10 "kuya ku-24" kepha senza ngokwezifiso i-oda lakho kuze kufike ku-30 ".
I-hair yethu yemvelo yesikhumba sezinyosi izokuhlanganisa ngokungazelelwe ngezinwele zakho! Lezi ziphelele kulabo abenza nje i-CHOP yabo ye-BIG noma labo balabo abafuna nje ukwengeza ubude obuncane nobukhulu babo ezinyaweni zabo. Ngesiqeshana sethu semvelo ekusethi, ungafinyelela imigomo yakho yezinwele ngaphansi kwemizuzu ye-10!